Ndeipi yako yekushambadzira mutemo?
Sezvo Ashine akatanga kutumira kune vatengi veEurope mu1995, isu takatarisana nekupa masevhisi eOEM / ODM kune vatengi vedu kutenderera pasirese. Ashine anodada nekuve iye ari kumashure kwevatengi vayo, uye nekutsigira makuru mabrand mumisika.
Ndeapi hunyanzvi hwekambani yako?
Ashine anogadzira mutsara uzere wemadhaimondi maturusi ekukuya pasi uye kupora mumuti wayo wega. Nerongedzero yakanaka yekugadzira uye yakanakisa QC timu, mhando kusagadzikana kunovimbiswa.
B) Ashine ane timu yepamusoro yeR & D muindastiri. Iine makore anopfuura mazana maviri ezviitiko muindasitiri, timu yakakwanisa kugadzirisa matambudziko kune vatengi munyika dzakasiyana nenzvimbo, uye kuvabatsira kuvandudza maturusi ediimani akakodzera munguva pfupi yekuhwina mumakwikwi.
C) Ashine kutengesa uye timu yebasa revatengi inopa akanyanya masevhisi masevhisi kune ayo vatengi. Unogamuchirwa kutitumira email uye uzviwane nhasi.
D) Ashine anofunga zvakanyanya zvekudyidzana kwenguva refu uye anogara achichengeta kuzvipira kwayo kune vatengi. Iyo yakakosha tsika yeAshine ndeye, Kuvimbika uye Kuzvidavirira.
Chii chaunoita kuchengetedza hunhu hwakaenzana?
A) Kuti uchengetedze kuenderana kwezvinhu zvakagadzirwa, Ashine anoramba achishanda nevatengesi vayo venguva refu, uye haachinje izvo zvekushandisa zvemitengo yakaderera. Zvichakadaro, tinochengeta yakaoma QC pane izvo zvinhu nehunyanzvi michina mufekitori yedu.
B) Kune izvo zvigadzirwa zvakasimudzwa, Ashine haachinje maitiro ekugadzira uye zvisungo. Tine zviitiko zvekuramba tichigadzira chishandiso chakafanana nezvavaive muna 1995.
C) Chikamu chakakura chemari yaAshine chakaiswa mukuvandudzwa kwemitsetse yekugadzira otomatiki gore rega. Nemichina otomatiki, isu tinokwanisa kudzikisa njodzi dzezvikanganiso zvevanhu uye nekuchengetedza kuenderana.
D) Chekupedzisira asi chakanyanya kukosha, isu tine zvakanaka setup QC system inova ISO9001 inokodzera, uye yakanakisa QC timu yekuvimbisa iwo mhando mune ese nhanho yekugadzira maitiro.
Ndeipi nguva yekuendesa (tungamira nguva)?
Iyo yekuendesa nguva (lead nguva) inowanzo kuve kutenderera 2 mavhiki.
Ndezvipi zvakakosha nezve R & D Chikwata chako?
A) Mutungamiri weAshine, VaRichard Deng, ndemumwe wevakatanga kudzidza vane degree reDiamond Major kuChina. Ane makore anodarika makumi matatu ezviitiko, anoremekedzwa zvikuru sehunyanzvi nevanyanzvi vake muindasitiri imwe chete.
B) Chief Injiniya, VaZeng, vanove vanoona nezvechikwata chedu cheR & D, vane makore anopfuura makumi matatu vane ruzivo mukugadzira maturayimani maturu kune ese maficha.
C) Kunze kweavo mainjiniya mufekitori, yedu R & D timu inosanganisira mapurofesa akati wandei uye yavo timu yekutsvagisa muSichuan University, Xiamen University uye CMU, iyo inotibatsira kugadzira tekinoroji nyowani uye chengetedza hunyanzvi hwedu.
D) Ashine anoisa mari mune yakanakisa uye yehunyanzvi yekuyedza michina yekushandisa kweR & D, uye zvakare inogadzira yakakosha michina kuyedza zvisungo zuva nezuva.
Wakatotengesa kuEurope / America / Asia? Wanga uine vamwe vadiwa here?
Hongu, Ashine anopa madhaimani maturusi pasi rose uye 95% kutumira kune dzimwe nyika, isu tine shamwari dzepedyo muEurope / America / Asia, musika mukuru iAmerica, Scandinavia, Germany, Japan & Pacific, ndapota taura nesu kuti uwane ruzivo rwemusika chaiwo.
Ndeapi maexhibition awakambopinda?
Ashine anoenda kune ekuratidzira epasirese seWOC (World of Concrete), Munich Bauma Fair, Xiamen Stone Fair, Intermat Paris, Marmomacc Fair. Tinokugamuchira kuti utarise ruzivo rwekuratidzira kwedu pazasi:
Nzira yekusarudza chaiyo maturusi?
Mubvunzo wakanaka, isu tine mhinduro yakakwana yekugadzirira pasi, kukuya, kupora uye kugadzirisa. Welcome toTaura nesu kuburikidza neemail kana kufona kuti uwane yako chaiyo yekukurudzira.
Ndinoziva sei nezve yako chigadzirwa mhando?
Ndokumbirawo uteedzere Ashine HomePage muSocial Medias sezviri pazasi, pane dzakasiyana nyaya dzenyaya uye enzaniso dzekuyedza kesi, kana iwe uine imwezve kufarira, ndokumbirawo utibate isu kuyedza mamwe masampuli.
Kana paine matambudziko ehunhu, iwe uchaitei?
Kuvimbika uye Kuita basa ndiko kukosha kwedu kwekushanda nevashandi venguva refu. Ashine ane 100% ane chekuita nezvinetso zvemhando yepamusoro, zvekuongorora kwehunyanzvi, ndapota titumirei mamwe mapikicha echigadzirwa chisina kukwana uye tizivisei zvakaitika, semuenzaniso, pasi mamiriro, michina, uye inguva yakareba sei yekushandisa, kana zvichidikanwa, isu ' Ndichakukumbira nyasha kuti uvatumire zvakare uye ndikutumire zvinotsiva kana tangoziva chikonzero.
Iwe unopa emahara sampuli?
Kwete. Panzvimbo iyoyo, isu tiri kuteerera kumhinduro uye 100% mushure mebasa.
Mazuva 3-15 anotungamira nguva yekugadzira-mu-nguva kugadzirwa.
Ndeipi MOQ (Minimum Order Yakawanda)?
20pcs MoQ yechinhu chimwe nechimwe / kutaurwa.
Iri sei pasuru yemapads ako?
Tiri kupa 3pcs set, 6pcs set, 9pcs seta rakasiyana bhokisi remukati. Kuti ive yakagadzirirwa kana kuraira kwakawanda.
Mberi muripo pamberi kugadzirwa.
Concrete makorari Mapedhi, Concrete vachikuya Shoes, Diamond Kwayedza Bhutsu, Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri, PCD Kukuya Shangu,